Manje, mfundi othandekayo, uzofunda indlela senkampani Dunlop useshintshe umbono lwesintu ku abavamile, ezibonakala into - ibhasi. Uzobona indlela kusuka kulokulula isondo ibhayisikili a wobuciko Dunlop SP Ezemidlalo 01 umsebenzi ngokugcwele nokubekezela.
Ngo-1889, e-English Birmingham kwathiwa inkampani eyasungulwa ukuze ukukhiqizwa amathayi ampontshwayo, ethiwa «Dunlop» behlonipha umsunguli walo - Dzhona Danlopa. Ekuqaleni ekhiqizwa ibhayisikili amathayi, futhi kuphela 1893 waqala ukukhiqizwa imoto. Kukhona ezingaphansi eYurophu: Austria, eJalimane, Canada neFrance. Ngo-1896 inkampani esakhile ukuhlolwa laboratory lokuqala amathayi, okuyinto ehlukile emhlabeni wayengekho. Ngemva kweminyaka emibili, enjoloba kanzima cishe yonke indawo sithathelwe indawo womoya.
Kuyo yonke le minyaka engu-30 ezayo, thina wamisa ukukhiqizwa zezindiza kanye amathayi yezolimo. Ngo-1956, Dunlop esethula isondo lokuqala nge "Formula 1" yokuba umvikeli imvula imincintiswano. Ngemva kweminyaka emibili, ngo-ngala mathayi baqala ukusebenzisa inayiloni intambo, okuyinto kakhulu ukunciphisa isisindo kwesondo. Kuze kube ngo-1977 inkampani ibilokhu umphakeli ematheni amathayi lo mncintiswano. Kusukela ngo-1962, i-steel asetshenziswe ekukhiqizeni amanye amathayi zokwenziwa kuyo izihlahla zenjoloba. Okwamanje, lobu buchwepheshe isetshenziswa zonke izitshalo, futhi ikuvumela ukuba ukwandisa isivinini ngenkathi ushayela. imodeli isondo Dunlop SP Ezemidlalo Maxx GT elakhelwe izimoto ezemidlalo. It has a intambo ezimbili kusukela ngensimbi futhi unikeza enhle umshayeli yokusingatha ngesivinini.
Eminyakeni embalwa eyalandela, ochwepheshe yenkampani aba phakathi kwabantu bokuqala ukuthuthukisa isimiso Denovo amathayi (ababengaphambi Dunlop SP Ezemidlalo 01), okuvumela ukuba ngithuthe kanye ithayi punctured ibanga elide - ngaphezu amakhilomitha angamakhulu - ngesivinini 75-80 km / h. Izindleko yalezi amathayi kwaba ngempela high, kodwa ukwethulwa ubuchwepheshe obusha uye wakuvumela ukuba kuncishiswe. Ngenxa yalokhu Dunlop wakwazi ukuqala supply amathayi ehola abakhiqizi imoto, ubani ukufaka kubo njengoba standard. Yiqiniso, Kuyinto edabukisayo ukuthi izimoto zethu Russian azikwazi ngamathayi enjalo, futhi akunakwenzeka ukuba igcwaliswe esikhathini esizayo esiseduze.
Abanye onobuhle amathayi, ezifana Dunlop SP Ezemidlalo 01, wawina kazwelonke ngempela uthando abashayeli. Umklamo we onjiniyela yimpandla ukuhlanganisa izici ezibalulekile: ukuphepha, ukuthula, isivinini, okuyinto ibangelwa ngenxa design engalingani. Futhi imoto ukuqinisekisa ukuziphatha elilungile endleleni kuzo zonke izimo futhi isimo asphalt egandayiwe. Le modeli ilungele zonke izinhlobo sedans.
Ukuze wheel drive izimoto ezine yakhelwe Dunlop SP Ezemidlalo Model 7000, okuyinto has a jikelele iphethini A / S - ngezikhathi zonke zonyaka. A izithasiselo ekhethekile iraba zikuvumela ukuyisebenzisa njengoba asphalt ashisayo nabandayo e ngezinkathi zemvula. Lesi sici oluhlobene kakhulu ezweni lethu, lapho bonke abashayeli ukubambezeleka esikhundleni iraba ku offseason, yingakho emva iqhwa bakuqala bawa, lapho ikhambi kumane ongenangqondo. Lezi amathayi ethandwa kanye Dunlop SP Ezemidlalo 01.
Kuyinto engenakwenzeka overestimate umnikelo ukuthuthukiswa ukukhiqiza isondo Dunlop sika. onjiniyela zayo cishe yonke into yokuqala umfuziselo wadalwa lugs ezinhlangothini futhi wabasebenzisa njengezinceku izikopelo iraba nensimbi, baye bakuqaphela umqondo kokusebenzisa ibhasi ngaphandle kwekhamera. Sumitomo iraba Industries - corporation ukuthi ungumnikazi inkampani «Dunlop». Kuze kube manje, it has a base esiqinile yesayensi, futhi lokhu ukuvumela ukuthi kuhlale iminyaka eminingi omunye abakhiqizi eziholela amathayi emhlabeni. Namuhla, Dunlop brand amathayi ekhiqizwa emazweni ayisishiyagalolunye emazwekazini amathathu: Melika, e-Asia naseYurophu.
Carbon izandla siqu: imoto sekugcineni
Uyini Psychology ubumpofu
Proper ukunakekelwa kwesikhumba entwasahlobo
Ubuthi be-arsenic: izimpawu, izimbangela, usizo lokuqala, imiphumela
Development Zone eliseduze Ingane